Naveed Khan: Tantaran'ny Pakistaney ao Dubai | Tiavo ny UAE!
navoakan'ny Dubai City Company at Enga anie 19, 2019
Naveed Khan: Tantaran'ny Pakistaney any Dubai - Eto an-tananao ny fiainana amin'ny tanana roa!
Naveed Khan 26th Aprily 2008, angamba andro tsotra ho an'ny fivelomana matihanina any Pakistan ary Emira Arabo Mitambatra, fa nanova ny fiainana ho ahy. Izany no andro rehefa nifindra tany UAE aho mba hitady hoavy tsara kokoa.
Nanana be dia be aho nofinofy sy faniriako momba ny fanapahan-kevitro. Nanantena aho ary nampanantena betsaka handinika ny tantaram-pahombiazan'ny olona miasa ao, manantena rehetra ary ny fampanantenana toa marina.
Izy io no fandehanako rivotra voalohany indrindra ary tsy fitsangatsanganana an-toerana izany Nankany amin'ny firenena iray hafa aho miaraka amina kolontsaina hafa, fomban-drazana ary fiteny samy hafa. Izany no fanamaivanana mitovy ny fivavahana.
Naveed Khan: Tantara avy amin'ny Pakistane in Dubai
Vao nanomboka ny fanamby amin'ny fisamborana asa any Dubai
Io teboka tokana io no nanome ahy herim-po sy tanjaka miatrika ireo fanamby atsy ho atsy amin'ny fikarohana asa. Nandeha avy tao Lahore aho tamin'ny alina ary tonga teo amin'ny misasakalina tany Dubai. Dubai Airport no fifaneraserako 1st miaraka amin'ny fihodinana haingana. Voalaza fa raha misy te handray hevitra ny fitsidihana fomba fiaina misy eto amin'ny firenena ny serivian'izy ireo, ny seranam-piaramanidina ao Dubai, no nanome ahy izany.
Tena mahagaga mba hahitana olona sy fiteny be dia be hita ao ambanin'ny tafontrano. Izany dia ary nofinofiko ny hahita olona avy amin'ny foko sy fiteny ary fivavahana rehetra miara-milamina.
Fantatro taty aoriana fa izany dia tsy maintsy atao raha tsy mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Na iza na iza ianao ary iza raha nandika ny lalàna ianao dia tsy afa-mandositra. Mety ho tsy mitovy amiko ny olona monina ao, fa na dia marina aza izy ireo dia firy ny olona hankafy fitsaboana manokana angamba amin'ny 5% ka 10% amin'ny Mponina any UAE, na dia somary tompon'andraikitra eo anatrehan'ny lalàna aza izy ireo, fa ny fitsaharana izay mipetraka any amin'ireo tanàna sy mamorona fiarahamonina dia hentitra tanteraka ao ambanin'ny lalàna.
Na izany na tsy izany Airport, Nataoko malemy ny lalina mpiasan'ny fifindra-monina izay ranomasom-pifaliana ho ahy. Taty aoriana dia mitovy ihany ny mpiasa mahazatra. Ny mpiasa toa izany dia ny tarehin'ny firenena tsirairay satria izy ireo dia ao amin'ny laharana voalohany ary ao amin'ny varavaran'ny firenena ho an'ny olona avy any ivelany, Nahita tranga sasantsasany izay namoronana korontana nefa ny ny mpiasa dia miezaka manazava azy ireo amin'ny fomba milamina.
Miaraka amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai
Izay no azoko raha manao ny rariny amin'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina ianao Izy ireo dia hitsabo anao tsara, ary tsy hatahotra ianao raha tsy nahavita zavatra tsy mety ianao, ity fanambarana ahy ity dia ho voaporofo amin'ny ambaratonga farany amin'ny lahatsoratro. Ny akanjo lava mankany amin'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina fa tena mazoto manatanteraka ny andraikiny sy ny fikarakarana azy ireo fandehanan'ny olona be dia be avy amin'ny kolontsaina samihafa tsy hanelingelina ny fandidiana. Satria ny seranam-piaramanidina Dubai dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao mbola mandeha tsara sy ny vokatry ny ezaka mafy ataon'ny mpiasa rehetra. Indraindray mahery noho ny firenanao izy ireo.
Nahazo aina tokoa ny tontolo manodidina ny seranam-piaramanidina, ka tsy nahatsapa ho toy ny toetr'andro ivelany aho. izay matetika ao amin'ny UAE tamin'izany andro izany. Niandry ny fianakavian'ilay mpampiantrano ahy aho. Na dia teo amin'ny misasakalina aza dia tsy afaka nahita volom-bolo tokana teo amin'ny tavany aho raha vao tara ahy. Tsy maintsy mandeha 139 Km avy any Abu Dhabi haka ahy avy any Dubai.
Fantatry ny olona fa tsy ny elanelana ihany fa ny fifamoivoizana. Lalan'i Abu Dhabi raha oharina mety kokoa hivezivezy noho ny Dubai, noho ny fiaingany sy tsy manao varotra. Na izany aza, dia niarahaba ahy tamim-pifaliana ilay tovolahy, izay efa nipetraka tao nandritra ny taona maro. Tsapako taty aoriana fa ny fihetsika nataony dia noho ny fitaoman'ny kolotsaina UAE momba ny fitsaboana ny vahiny izay nampidiriny tao anatin'ny toetrany. Nangatsiaka ny alina noho ny andro mafana.
Nivezivezena izahay tamin'ny lalan'i Dubai talohan'ny nandehanany tany Abu Dhabi. Ilay roaming dia noho izy te-hihinana amin'ny maha-mpampindrana toerana, dia fantany ny zava-misy ananako nandeha avy any an-tany hafa ary tsy maintsy ho noana aorian'ny fomba fanao, fifindra-monina ary fanangonam-bokatra.
Nijanona teo amin'ny sehatry ny sakafo izahay ary tsy tadidinay ny nohaninay tany, fa ny zavatra tadidiko dia matsiro. Teny an-dalana, ny mpampiantrano ahy dia nitana ny fandraisan'anjara fitantanana fizahantany, izy dia nilaza ny momba ireo mari-pamantarana izay nolalovantsika. Corniche, mall, lapa ary tilikambo maro be dia be milaza ny Dubai ary na dia ilay dia lavitra aza dia voasarona nefa tsy ho reraka.
Tsy misy toy ny milalao eny an-dranomasina.
Burj Khalifa ary ny Burj Dubai
Tena niavonavona loatra izy nilaza tamiko Burj Khalifa (Avy eo Burj Dubai) izay tao anatin'ny faran'ny famaranana na famaranana farany. Fantatro izao raha nanoratra an'izany aho lalana kely mankany amin'ny làlan-kely mankany Abu Dhabi, fa kosa, naka lalana izy hanehoako ny maha-be sy ny hakanton'ny tanàna. Nandritra ny fomba rehetra dia nidera tsy tapaka an'i Sheikh Zayd izay nantsoiny hoe Baba Zayd (antsoin'ny fahita matetika. Pakistane). Toy ny hoe mankalaza an'io mpitarika lehibe no ampahany amin'ny dinika.
Rehefa niala tao Dubai izahay ary rehefa tafiditra lalindalina izahay Shiekh Zayd lalana nitarika an'I Abu Dhabi, tsy tadidiko fa, nahatalanjona ny nahita ny rafitra fifamoivoizana misy fiara be dia be sy milamina ary nokasaina izany Mora tokoa ny family fiara eny an-dalana raha mbola manaraka ny lalànan'ny fifamoivoizana ianao. Nilaza tamiko ny mpampiantrano ahy sy mpanoro ahy fa ny fahazoan-dàlana mitondra fiara dia tena sarotra be. Izy mihitsy no nahazo izany tamin'ny andrana fahatelo. Mampiseho izany ny fomba fampiharana tanteraka ny lalàna any amin'ny fanjakana.
Io koa dia mampiseho fa miahy ny filaminan'ny olona sy ny tsy fahaiza-miaina ny fanjakana dia afaka eo amin'ny seza fitaterana na fiara io na fanjakana raharaham-barotra. Naneho ny fahalianako aho dia nanontany fanontaniana maro taminy ihany koa, ohatra, nahita tetezana sy tsangambato aho ary nanontany momba izany aho, nilaza tamiko izy fa eo ambanin'ny lalamby fanamboarana fiaran-dalamby, fiaran-dalamby. dia hihazakazaka tsy ho ela manomboka any Dera Dubai mankany Jebel Ali.
Ny UAE Megaprojects
Gaga be aho nahita hoe ahoana ny fomba miaraka ny fanjakana miasa amin'ny tetikasa mega. Landmarks, fotodrafitrasa, toerana fialamboly anarana ilainao ary ho hitanao ny fananganana. Ny fivoahana avy any Dubai, Nasehon'ny mpampiantrano ahy ny làlan-dàlana izay mankany amin'i Palm Jumeirah, ary tsy afaka namangy azy mihitsy aho. Hoy izy toerana tena lafo. Aiza no ahitantsika ny fananganana maro be ho an'ny besinimaro izay hitantsika fa ny sasany dia mahazo vola ihany koa. Mety ny hiteraka vola fa ny fomba fampiasana azy io no zava-dehibe sy manana fahitana mahafinaritra momba izany ny mpitarika ny UAE. Fantatr'izy ireo ny fomba hahazoana ny vola amin'ny elite ary mandany izany amin'ny daholobe amin'ny ankapobeny toy ny Robin Hood saingy tsy manala lalàna J izany, raha ny marina, manam-pahefana iray.
Lalàna sy fitsipika ao Dubai
Ankoatra ny fananganana dia miharo-tena ihany koa ny faritra, nahagaga ahy foana ny fahanginana sy ny tany efitra, ianao dia akaiky kokoa ny mpamorona anao amin'ny toerana toa izany ary ny fizahan-tany no nanome ahy fahafahana. Tsy fahita firy ny handrava ny fiara satria misy lalàna hentitra momba ny fitaizan'ny fiara raha misy fiara tsy mandalo ny fitsapana fanatanjahan-tena takiana isan-taona tsy hita eny an-dàlana, ny lalàna toy izany dia mahasoa mandrakariva ho an'ny besinimaro mba hialana amin'ny loza mety hitranga. Raha teo aho dia nahare lalàna momba ny mpandeha an-tongotra tsy ho ela hotanterahina. J Walkers dia ho voasazy tsy ho ela. Misy lalàna iray hafa ho an'ny filaminam-bahoaka. Ary fantatry ny olona rehefa ampiharina ny lalàna dia hifikitra mafy tokoa izy.
Ny fahatahorana ny lalàna dia fiantohana amin'ny fandriam-pahalemana sy fandehanan'ny raharaham-panjakana. Ny zavatra niainako manokana dia tsy ho voasary amin'ny iray bilaogy be dia be ny manoratra ary hosoratana ao anatin'ireo bilaogy ho avy ireo. Tsy bilaogy fotsiny io fa lesona sy fiainana niainako, izay hozaraiko mandritra ny fotoana iray. Ny olona monina ao dia mety tsy noheveriny ho zava-dehibe fa ny ezaka nataony ihany manampy ny olona hahafantatra an'i UAE, zavatra maro no mety efa niova ary ny atiny dia hitoetra ho mitovy. Mety hanorina sy handrava ny tranobe nefa mijanona ao ny mpanao trano ary ny mpanorina no mpitarika sy olon'ny fanjakana …….
Jereo ny UAE manontolo Abu Dhabi, Dubai, Sharjah
Taorian'ny dia lavitra dia tonga tany amin'ny toerana alehako any Maroor Road Abu Dhabi aho. Nandany ny herinandro voalohany nijereko ny tontolo iainana aho, olona sy manodidina. Ny traikefa nahafinaritra indrindra dia ny Masaajid ny faritra izay hitako taty aoriana nanerana an'i UAE Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Al Ain sy Ras Al Khaima dia manana masaajid tsara tarehy. Ny zavatra tsara indrindra ao amin'ny masajid Adhan dia vakiana miaraka. Ny feo tsara amin'ny moazins dia miely amin'ny maraina mahafinaritra, andro, atoandro, hariva ary alina. Arabo toy ny fitenin-drazany dia azan no feo maloto indrindra eto an-tany.
Soa fa tsara i Masaajid nataon'ny governemanta ka tsy misy fitoriana amin'ny sekta na fandaminana manokana. Irak ao amin'ny faritra masjid izay nipetrahako dia Irakiana, tena tsara fanahy izy ary manetry tena. Na dia tsy dia mahay teny Arabo aza aho dia mbola manome ahy resaka momba ny resaka Islamika sasany izy ary Gaga aho raha tsy nahalala ny teny Arabo. Azoko tsara ny teny tsirairay sy ny teny rehetra nolazainy tamiko. Mihevitra aho fa ny firahalahiana islamika no nahatonga anay hiresaka am-po.
Ny firafitra Masajid dia tena kanto ka manamarina ny niantsoana azy hoe fonenan'ny Tsitoha. Hitako ireo ankizy avy teny amin'ny manodidina nitondra ny kitapo ny sekoliny ary nanao ny entany tao amin'ny Mosque. Mahavelom-bolo ihany fa ny Masajid dia mitana ny toeran'ny ivondrom-piarahamonina fa tsy amin'ny fotoam-bavaka fotsiny. Ity kolontsaina ity dia mendrika harahina amin'ny firenena silamo rehetra. Nilaza tamiko ny mpampiantrano ahy fa ny volana Ramadany no volana mahafinaritra ao UAE izay anarian'ny olona ny fitiavany sy ny fihetseham-pony sy ny fahalalahan-tanana, ny andro Ramadany dia mifaly. Azoko an-tsaina izany izay lazainy dia ny marina.
Tanàna ao Dubai
Ankehitriny amin'ireo tsena, toa ny tsena rehetra nomanina no namboarina ihany koa miaraka amin'ny drafitra hamelomana ny filàna fototra rehetra vondrom-piarahamonina eo akaikiny. Mpanapaka, mpanao mofo, fivarotana lehibe ary fivarotana lalao lalao. Ireo fivarotana kely rehetra dia tarihan'ny vondrom-piarahamonina aziatika manokana Pakistaney, Indiana sy Bangladeshi. Ny kalitaon'ny sakafo dia tsara indrindra.
Ny zava-mahafinaritra ho ahy dia ny toerana filokana, nahita vondrona tanora aho Arabo milalao lalao mifampitifitra ary mifanohitra amin'ny alàlan'ny tambajotra. Nahamenatra ahy ilay lalao saingy ny mampientanentana ahy dia ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny lalao. Rehefa niantsoantso izy ireo amin'ny teny arabo mahatsikaiky ahy izany. Nivadika ara-bakiteny ny fivarotana lalao amin'ny alàlan'ny antsoantso, matetika aho no mankafy an'io.
Nahita zavatra iray aho
Zavatra iray izay hitako fa mety hanjavona legioma sakafo sy voankazo dia tsara amin'ny fahitana fa amin'ny tsiro tsy dia tsara. Ny antony dia mety, ireo tsy manana ny fiakaran'ny tany ao. Ny UAE dia talen'ny varotra rehetra noho izany ny fisian'ny vokatra rehetra novokarina, nohamboarina na namboly nanerana an'izao tontolo izao dia mora hita eto ary ny fanamainam-bolo manodidina ny fijinjana dia tsy mora. Noho izany dia nanana izany hitazona sakafo azo eny an-tsena. Fa ny kalitaon'ny zava-pisotro malefaka, ny ranom-boankazo, ny entona mofomamy dia mihoatra ny tampony indrindra.
Ny menaka oliva, Khubuz, Houmous dia toa ny mahazatra sakafo isaky ny trano, sakafo mahavelona io ary mifanandrify amin'ny tontolo iainana toa an'i UAE. Zava-baovao vaovao iray dia nitodika tany amin'ny fivarotan-tsakafo haingana ao amin'ny Burger sy Shawarmas. Tamin'izany fotoana izany aho dia nividy ampy McDonald sakafo ho an'ny AED 12. Mendrika ny hividy izany. Amiko, raha mandeha sakafo tsotra izahay AED 20 dia ampy ho an'ny olona mahazatra mandany ny sakafo isan'andro.
Ny tsaroako ankehitriny fa ny khubuz dia an'ny filis 75 ary ny zava-pisotro malefaka dia an'ny AED 1 any Abu Dhabi. Ho an'ny boky any Dubai azafady manampy azafady ny fillis 25 ao amin'ireo entana roa rehefa nividy azy tany Dubai aho. Zohrat tul Libanona dia fitsaboana mahafinaritra avy amin'ny mpampiantrano azy, ny sakafo isan-karazany dia mahafinaritra tokoa ny tsirony. Iry feno olona nefa mbola nahomby. Iray amin'ireo toeram-pisakafoanana malaza indrindra amin'i Abu Dhabi izy io. Nolazaina tamiko fa manana trano fisakafoanana io manerana ny UAE.
The Dubai Mall & Mall of Emirates
Ireo mall iray amin'ireo mahasarika indrindra an'ny UAE. Na tsy te hividy zavatra aza ianao, dia misy zavatra ho anao izany. Misy sinema amin'ny toeram-pivarotana lehibe tsirairay manana tontolo iainana sy milamina. Ka afaka mankafy sy handany fotoana eo. Indray mandeha aho, dia tsy maintsy nitsidika ny biraon'ny fiaramanidina tany Dubai, ary tonga tany amin'ny birao aho tamin'ny mitataovovonana ary tahaka ny ankamaroan'ny biraon'ny varotra, mihidy amin'io fotoana io ary tokony hamoha ny tolakandro, mila miandry ora 3 aho. Nanontany tena aho hoe: Niditra tao Marina Mall aho ary tsy haiko hoe lasa aiza ny fotoana. toy ny mason-jaza izany. Tsy nanao na inona na inona afa-tsy nijoro fotsiny aho ary nijery ny fihodinan'ny manodidina. Teo no nahatsapako fa ny Dubai dia zavatra izay tsy azo fohifohy amin'ny teny taloha.
Ny toetrandro tamin'izany andro izany dia i Abou Abu Dhabi dia mihetsika eto ivelany, somary mafana ny andro fa amin'ny rivotra hariva dia manempotra ny rivotra. Ho an'ny eto an-toerana (Muwaatin) dia tsy olana mihitsy satria aza miala amin'ny tranony mandra-pahazavana ny masoandro amin'ny arabe.
Ny fahatsapana fiarovana sy ny fahalalahana be dia be tao amin'ny vondrom-piarahamonina nanomboka nandehandeha irery aho tao anatin'ny andro 2 tsy misy tahotra. Toa izany ny fiaraha-monina amiko. Ny fandraisana olona vaovao dia tafiditra ao anatin'ny kolontsain'izy ireo.
Fitateram-bahoaka amin'ny UAE
Ny serivisy fitaterana dia tsara indrindra manerana an'i UAE, Taxi, ny bus busses isaky ny alàlan'ny marika ho an'ny mpandeha dia somary lafo be ny Taxis nefa raha taxi tsy miankina izy io dia mifaninana ara-bola miaraka amin'ny taxi-miasa izay orinasa rehetra, ny fiara fitateram-bahoaka dia mahazo aina tsara ary manana seza tsara indrindra sy misy rivotra tsy misy fika avoakan'ny toetr'andro koa. Ny Vans dia afaka mandeha amin'ny dia lavitra izay mahazo aina ihany koa. Noho ny politikam-pifamoivoizana henjana dia tsy dia fahita firy akory izay nisy mpandeha nitaraina momba ny fiara na mpiasan'ny fiara.
Tao anatin'ny roa herinandro ny zavatra nataoko teo ambony Tapa-kevitra ny hanao UAE aho ny trano faharoa ananako. Amin'ny andiany manaraka dia hanoratra momba aho ny fitadiavako asa.
Mifandray amin'ny: Naveed Khan ao amin'ny Linkedin
Torohevitra momba ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana ho an'ny fiteny tsirairay ho anay Jobs in Dubai Guides. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo toro-hevitra sy toro-hevitra ary asa any United Arab Arab ianao izao Emirates amin'ny fiteninao.